အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၅	38
Posted by kai on Sep 2, 2015 in Editor's Notes, News | 38 comments
Posted: 09/01/2015 11:05 am EDT Updated: 09/01/2015 11:59 am EDT Dominican Republic – prostitution is legal
Thailand – prostitution isn’t strictly legal, it’s not exactly illegal either
Cambodia – prostitution (though illegal) has risen in recent years
The Netherlands – legal marijuana and rampant (and unapologetic) sex industry.
Spain – heavy club and bar scene have also become popular destinations for sex tourism.
Brazil – prostitution is legal in Brazil
Philippines – prostitution is illegal
တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်း
kai says: Triple Threat — Trio of Hurricanes Hit the Pacific Ocean
Brittany Jones CooperEditor, Yahoo Travel
According to Weather.com, mother nature’s amazing feat began around 11 p.m. on Aug. 26, when Hurricane Kilo (135 mph) started spinning southwest of the Hawaiian Islands. It was soon joined by Hurricane Ignacio (140 mph) to the east, and Hurricane Jimena (140 mph) in the eastern Pacific.
kai says: ပုံရဲ့..အပေါ်…ညာထောင့်က.. မြေဟာ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားဖြစ်ပါကြောင်း…။
ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာ.. ၄နှစ်ဆက်တိုက်.. သွေ့ခြောက်မှုဖြစ်ခဲ့တာကို.. ဒီလပိုင်းတွေမှာ.. ၂ပြန်တိုး ၃ပြန်တိုးနဲ့.. မိုးတွေလေတွေ.. ရတော့မယ့်..သဘောရှိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: The state department released 4,368 emails – totalling 7,121 pages – late on Monday.
Image caption An email forwarded by Mrs Clinton’s adviser Jacob Sullivan on Burma was published heavily redacted
On Monday, the state department said about 150 of the messages had to be censored because they contained information considered to be classified. On Tuesday, it revised the figure to 125 messages.
One of the emails – sent in November 2013 by Mrs Clinton’s then foreign policy adviser Jacob Sullivan – was published heavily redacted and marked classified until 2025.
Mr Sullivan, who is nowapolicy adviser for Mrs Clinton’s presidential campaign, forwarded her boss the email with the subject line: “No go on Burma (Myanmar) travel.”
kai says: ဟီလာရီကလင်တန်အီးမေးလ်တွေကို.. ထုတ်ပြန်နေတာမှာ.. မနေ့ကထုတ်တဲ့.. အစောင် လေးထောင်ကျော်ထဲ.. မြန်မာနဲ့ပါတ်သက်တာ.. ပါလာလို့.. မှတ်တမ်းထားလိုက်တာပါ..။
ဟီလာရီကို.. အီးမေလ်းဆာဗာသုံးတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး… တခုခု ထိန်ဝှက်ထားတယ်လို့.. အမေရိကန်တွေကယူဆကြပါတယ်.။
ပြီးခဲ့တဲ့.. တပါတ်က..Quinnipiac တက္ကသိုလ် ရဲ့ဆာဗေးအရတော့.. ဟီလာရီကလင်တန်ကို.. အများစုက.. Liar လူလိမ်လို့သမုတ်ပါတယ်..
1:01 PM, Aug 27, 2015 • By MICHAEL WARREN
တခုခုကို ထိန်ချန်.. ကွယ်ဝှက်ပြောရင်လည်း/မပြောပဲနေရင်လည်း.. လူလိမ်ပါပဲ..တဲ့…။
မုသာဝါဒါကို.. ကမ္ဘာ့လူအများစုဖွင့်တာနဲ့.. မြန်မာတွေဖွင့်တာ.. နှိုင်းယှဉ်စေလို…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: A liar is ….. someone who doesn’t tell the truth.
What happens when (other)someone can’t handle the truth.? Those are not my own words…
Colonel Nathan R. Jessup said them in “A Few Good Men”.
Who’s gonna do it? How can we define “what is the truth”?
kai says: လူ့ယဉ်ကျေးမှုက.. မြစ်ရေအလျှင်လို..တသွင်သွင်စီးဆင်းနေလေရဲ့…။
အသစ်အသစ်မွေးဖွားလာသူတွေဟာ.. အများစုခြုံငုံကြည့်ရင်.. အတိဇာတ(မိဘာထက်သာလွန်သူ) တွေများတယ်…။
ဒါကြောင့်… လူ့ယဉ်ကျေးမှုက.. တဖြည်းဖြည်း…တိုးတက်လာတယ်ပေါ့….။
ရှေးစာလုံး.. ဂဏန်းသင်္ချာမရှိတဲ့ခေတ်တွေ… အဲဒီခေတ်ကအတွေးအခေါ်တွေ… ကျန်ခဲ့ပေါ့…။
ဒီလိုအင်တာနက်ခေတ်ကြီးများ.. ကမ္ဘာ့အရှေ့..အနောက်..တောင်..မြောက်..အသိ..သညာ..ပညာ..အရွေ့အပြောင်းအသိ.. သိပ်မြန်…
တက္ကသိုလ်တွေ… ကျောင်းတွေ.. သင်ရိုးတွေ.. ခဏခဏပြောင်းနေရ…။
နိုင်ငံရေး.. ယဉ်ကျေးမှု.. ဘာသာရေး.. ဥပဒေတွေပြင်ထုတ်နေရ….
အမှန်တရား..သစ္စာ..ဟာ.. ဒီလိုခေတ်မှာ..လက်တွေ့နဲ့သာယှဉ်.. အချိန်တခုပိုင်းခြားသတ်မှတ်… အဖြေထုတ်သင့်…။
@QUIL@ says: ဆပ္ပတန်မ်းဘာ့ လေးဘာလေးလုပ်ပါဗျ
အရင့်အရင် နှစ်တွေက ဂျွန်တွေ ဂျူလိုင် တွေ လုပ်ခဲ့တာလေး မမှတ်မိတော့ဘူးထင့်
မြစပဲရိုး says: Facebook ထဲ မှာ ရုရှားမလေးတစ်ယောက် မြန်မာစကား ကို အတော်လေးစိတ်ဝင်စားပြီး
အဲဒီ မိန်းကလေး က မြန်မာလိုလဲ ဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်တယ်။
နာမည်လေး တောင် မြန်မာလို ပေးထားတာ ဝသုန်မိုး တဲ့။
ဒါကို ကျွန်မတို့ အားလုံး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြတယ်။
ရိုးရိုးလူတင်မက ဘုန်းကြီးတွေပါ ဝင်ပြီး ကြိုဆိုသေး။
အတိတ်ကံ ကြောင့် တို့ အထုံပါရမီ ရေစက် တို့ ပါ ဆွဲထည့်လိုက်သေး။
အဲဒီ မှာ ခြေချဘူးခဲ့တဲ့ အဘတို့ သားလေးတွေ လဲ သူ့နားမှာ တရုန်းရုန်း ပေါ့။
အဲဒီ မိန်းကလေး က မြန်မာအမျိုးသားလေး တစ်ယောက် နဲ့ ချစ်ကြိုက်ပြီး လက်ထပ် မယ် ဆို ဘာပြောကြမတုန်း။
.မြန်မာစာကို စိတ်ဝင်စားတာ မိန်းကလေး မဟုတ် ဘဲ ကျားကလေး ဆို ဘာပြောကြမတုန်း။
.မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက် ကလဲ ရုရှားစကား ကို စိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာရုံမက ရရှန် လို ဝတ်ပြလိုက်ရင် ဘာလိုများ ဝေဖန်ကြမတုန်း။
အဲဒီ မိန်းကလေးက ရရှန်လေးတစ်ယောက် နဲ့ မေတ္တာသက်ဝင်ရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမတုန်း။
သူများ က ကိုယ့်ဘာသာစာ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားတော့ သဘောကျကြတယ်။
ကိုယ့်ကျတော့ သူများဖက် ကို မမြင်နိုင်အောင် အသိနဲ ကြတယ်။
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီး ကို အမြင်ကျယ်ကျယ် နဲ့ ကြည့်နိုင်ကြဖို့ လိုပြီ။
kai says: Changing Myanmar moving Forward… တဲ့…။
ဟိုက.. အိုဘားမားမို့.. အို(o) စာလုံးကို.. ဒီဇိုင်းလုပ်တာ..
kai says: The White House
kai says: China vs US vs Myanmar
ဇီဇီခင်ဇော် says: ယိုးဒယား ဘက် ရောက်သွားရှာတဲ့ မြန်မာမ တွေ မနည်းဘူးဗျ။
ယိုးဒယားမှာ အရှေ့တောင်အာရှ ဆင်းရဲနိုင်ငံက ကလေးမတွေ အများကြီးတဲ့။
kai says: New Delhi, Sept. 03 : Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that for the century to be an Asian century, one has to walk in the path of Buddha. He was addressing the Samvad Global Hindu Buddhist Initiative on Conflict Avoidance, Environmental Consciousness and Dialogue. Prime Minister Modi and former Sri Lankan President Chandrika Kumaratunga were among the guests at the event. (Read: Narendra Modi: Climate changeamajor concern)
“We in India are proud of the fact that it was from this land that Gautam Buddha gave the world the tenets of Buddhism. Life of Gautama Buddha illustrates the power of service, compassion and most importantly renunciation. Gautam Buddha was convinced that material wealth is not the sole goal,” said the Prime Minister. He also narratedastory about philosophers Mandana Mishra and Adi Shankara.
“It is my firm belief that the solution to all problems lies in dialogues. One of the greatest dialogue and debate was between Mandana Mishra and Adi shankara. Mishra’s wife was chosen as the moderator. She said that the person whose garland withers first will be declared the loser,” he said.
“The reason was that anger in debate will generate body heat which will lead to losing the debate. Madana Mishra lost and becameadisciple of Adi Shankara. The legendary debate on merits and demerits of Hindu philosophy isalesson for all,” he added. The event was also attended by various Buddhist leaders and Sri Sri Ravi Shankar.
Modified Date: September 03, 2015 3:18 PM
ဦးကြောင်ကြီး says: သူရဦးရွှေမန်း ကို ရာထူးကဖြုတ်ချမည့် ကိစ္စ တရုတ် ၃ ရက်ကြိုသိ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးကနေ သူရဦးရွှေမန်းကို ဖြုတ်ချမယ့် ကိစ္စကို တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက ၃ ရက်ကြိုတင်သိရှိနေပါတယ်။
နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအပြီး မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းတို့ မဟာမိတ်က တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်သွားမယ်လို့ ဘီဂျင်း ပေါ်လစ်ဗျူရို အများစုက ခန့်မှန်းထားပေမယ့် ဦးရွှေမန်းကို ရာထူးကနေ အနားပေးလိုက်တဲ့ သတင်းကြောင့် ထိတ်လန့်ကုန်တယ်လို့ တရုတ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်က ပြောပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီအတွင်း အာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်မီ တရုတ်ကို အသိပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သြဂုတ် ၁၂-၁၃ ရက် ညသန်းခေါင်က နေပြည်တော်သူရဦးရွှေမန်းအိမ်ကို အစောင့်အကြပ်တွေက ၀ိုင်းထားပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရုံးချုပ်ကို စောင့်ကြပ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်ကို အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိက ဇူလိုင်နှောင်းပိုင်းနဲ့ သြဂုတ်အစောပိုင်းမှာ သတင်းပေးခဲ့တာလို့ တရုတ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်က ပြောပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေအတွက် သူရဦးရွှေမန်းဟာ သစ္စာဖောက်တဦးဖြစ်လာသလို မကြာခင်ထုတ်ပယ်တော့မှာလို့ သတင်းပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က မဟာမိတ်လုပ်ပြီး တိုင်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့ အများစုက မျှော်လင့်လက်ခံထားတဲ့ အတွက် ဘီဂျင်းက တော်တော်လေး အံ့သြပါတယ်” လို့ တရုတ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်က ပြောပါတယ်။
အများစုက ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဟာမိတ်ကို ထောက်ခံထားပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကတော့ ပိုပြီးတော့ ခန့်မှန်းထားတာမျိုး ရှိနေတယ်လို့ တရုတ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ တခြားသတင်းရင်းမြစ်တခုက ပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အဖွဲ့နဲ့ စစ်တပ်က ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း ဒီလိုဖြုတ်ချဖို့ သတင်းပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘီဂျင်းက ဘာတွေ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားသလဲနဲ့ တရုတ်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေက ဒီကိစ္စတွေအပေါ် လက်ရှိ အာဏာယူထားတဲ့သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိနေသလား ဆိုတာကိုတော့ တရုတ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ တခြားသတင်းရင်းမြစ်က ပြောဆိုဖို့ ငြင်းဆန်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အကြီးစားအာဏာသိမ်းမှု မလုပ်ချင်လို့ အသေးစား အာဏာသိမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီအတွင်းက အာဏာလွန်ဆွဲမှုက တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှအရေးကို လေ့လာနေတဲ့ ပါမောက္ခဟောင်ဝေဖန်က နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တရုတ်ကမြန်မာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒကို ပြန်လည် ထိန်းညှိမှာ ဖြစ်ပြီး မစွက်ဖက်ရေး မူဝါဒကို သင့်တော်သလို ပြန်လည် ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးခြင်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကို တက်ရောက်ဖို့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တရုတ်ကို သွားရောက်ခဲ့ရာမှာ တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ်တို့က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ဒီဗွီဘီ အလွတ်သတင်းထောက် Echo Hui
အဲဒီသတင်းရေးပုံနဲ့ဆို.. ကျုပ်က.. ၃နှစ်ကြိုသိတယ်ပြောမှာပဲ..
ကွိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: အရင်ဘ၀ထဲက သိတယ်ပြောလိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: သူရဦးရွှေမန်းကို ပါတီဝင်အဖြစ် လက်ခံနိုင်ကြောင်း NLD ဆို
Tuesday, 08 September 2015 07:44 Print Email ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၇
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီသို့ ကူးပြောင်းလာမည်ဆိုပါက ပါတီဝင်အဖြစ် လက်ခံနိုင်ကြောင်း ယင်းပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် NLD ပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး The Voice နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင်း အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစဉ် ၎င်းက ယင်းကဲ့သို့ ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပါတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ဖွင့်ထားတယ်၊ ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ မပြောချင်ဘူး၊ Member (အဖွဲ့ဝင်) အဖြစ်ကတော့ လက်ခံနိုင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း သူရဦးရွှေမန်းကို NLD ပါတီက တင်မြှောက်မည့် သမ္မတလောင်းအဖြစ် လက်ခံမည် ဆိုပါက ပါတီအတွင်း ပြဿနာများစွာ ရှိနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကအဖြစ် တာဝန်ယူပြီးချိန်မှ စတင်ကာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မကြာခဏ သီးသန့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ရှိသော်လည်း တွေ့ဆုံပွဲရလဒ်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
– See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/8201-tyu#sthash.dufMACuo.dpuf
kai says: Human head transplant edges closer to reality: Chinese surgeon teams up with Italian doctor to perform controversial procedure in 2017
Spiridonov has previously told MailOnline he is ready to put his trust in the experts who claim they can cut off his head and attach it toahealthy body By Sarah Griffiths for MailOnline
Published: 11:51 EST,9September 2015 | Updated: 13:19 EST,9September 2015
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3227954/Human-head-transplant-edges-closer-reality-Chinese-surgeon-teams-Italian-doctor-perform-procedure-2017.html#ixzz3lKFGAei4
kai says: Trump Sells Miss Universe Organization to WME-IMG Talent Agency
By JOHN KOBLINSEPT. 14, 2015
The sale, the financial terms of which were not disclosed, came afterarough summer for the organization’s Miss USA beauty pageant in which two television partners dropped the broadcast in response to comments Mr. Trump made about illegal immigrants during his presidential campaign.
NBC,apart owner of the Miss Universe Organization, backed out of the broadcast and also said that Mr. Trump would not be welcomed back as the host of “The Celebrity Apprentice.” (NBC announced Monday that Arnold Schwarzenegger would replace him). Mr. Trump fileda$500 million lawsuit against the pageant’s other television partner, the Spanish-language broadcaster Univision.
Donald Trump with Miss USA delegates in Las Vegas in 2013. He bought NBC’s stake in the Miss Universe Organization.
Donald Trump Says He Has Bought NBC’s Miss Universe StakeSEPT. 11, 2015
A Donald J. Trump piñata ataworkshop in Reynosa, Mexico, in June. While most American presidential candidates are trying to court the Latino vote, Mr. Trump derided Mexicans duringaspeech announcing his candidacy.
Mexico City Journal: And Now, What Mexico Thinks of Donald TrumpJULY 2, 2015
Carly Fiorina atacampaign event in Dover, N.H., on Saturday.
Showdown Between Carly Fiorina and Donald Trump Expected at Republican DebateSEPT. 14, 2015
One of the first tasks for WME-IMG will be to findanew TV partner for Miss USA. After NBC backed out of the broadcast, it was picked up by the cable channel Reelz, and hadasignificantly smaller viewership: 925,000 viewers compared with the 5.6 million people that watched it on NBC last year. The chief executive of Reelz, Stan E. Hubbard, said last month that the Miss USA broadcast wasaone-time event for the cable channel and that the beauty pageant belonged “onabroadcast network.”
kai says: ‘ပုဂံကို ရန်သူတို့ ဖျက်ဆီးသောအခါ အမျိုးလေးပါးသည် စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်၍ အချို့လည်း အောက်အကြေသို့ ပါကြရသည်။ အချို့လည်း အထက်အညာသို့ ပါကြရသည်။
ငါ၏ အကူအညီဖြင့် ထိုသူတို့ ပုဂံသို့ ပြန်ရောက်စေပါအံ့။
များစွာသော သူခပ်သိမ်းတို့သည် သားတကွဲ၊ မယားတကွဲ၊ မိကွဲ၊ ဖကွဲ ဖြစ်ကြရကုန်၏။
ထိုသူတို့၏ ဒုက္ခကို ငါငြိမ်းပါအံ့။ ထိုသူတို့၏ မျက်ရည်ကို ငါသုတ်ပါအံ့၊ ငါ၏ ယာလက်ဖြင့် ဆန်စပါးရိက္ခာကို ပေးအံ့၊ ငါ၏ဝဲလက်ဖြင့် ဝတ်စားတန်ဆာ ပေးအံ့။
အမိသည် သားငယ်အား ရင်ခွင်၌ နှစ်သိမ့်သကဲ့သို့ ငါသည်လည်း တိုင်းသူပြည်သားတို့ကို နှစ်သိမ့်ပါအံ့’
(ကျန်စစ်သား၏ မူရင်းမွန်ဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသော ရွှေစည်းခုံဘုရား ကျောက်စာကို မြန်မာပြန်မှ)
kai says: Opposition parties popular on social media, but not at the ballot box: Analysts
TODAY reports: The silent majority – those who do not express views online – appear to be behind the swing towards PAP, says former NMP Siew Kum Hong.
By Hon Jing Yi, TODAY
POSTED: 12 Sep 2015 08:02
SINGAPORE: The General Election results were in stark contrast with prevailing sentiment on social media sites as well as high attendance at the rallies of Opposition parties, analysts noted on Friday (Sep 11).
Photographs of the massive turnout at Workers’ Party rallies and long lines for Singapore Democratic Party chief Chee Soon Juan’s autographs dominated social media, but results from Polling Day — the People’s Action Party (PAP) walked away with 69.86 per cent of the vote — suggest that popularity on social media does not necessarily translate to votes.
“If your candidates can go house to house, door to door, if he or she actually leavesamessage for you to say please vote for me, I wish you well, these things can’t be done on social media,” said Assoc Prof Chong, adding that Prime Minister Lee Hsien Loong’s messages have been very effective.
kai says: အမတ်လောင်းများ..စာရင်း..။
kai says: ၆၀။ (က) နိုင်ငံတော်သမ္မတကို သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ရွေးချယ်
(ဃ) ဒုတိယသမ္မတများသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်
kai says: ဒီချုပ်အတွက်.. တောင်ပြိုကမ်းပြို.. Landslide victory က.. Plan A ဖြစ်ရမှာပါ..။
M Zaw Moe FB: တကယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ဟာ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးရဲ့ အရပ်သား အမတ်နေရာ ၆၈% အနိုင်ရခဲ့မယ် ဆိုရင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် အစိုးရ ဖွဲနိုင်ပါတယ်။ အရပ်သား အမတ်အားလုံးရဲ့ ၆၈% ဆိုတာ လွှတ်တော် အမတ်အားလုံးရဲ့ ၅၁% နဲ့ ညီပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့ Combination နှစ်ခု ရှိပါတယ်။
၁) ပြည်သူ့လွှတ်တော် မှာ ၂၂၅ နေရာ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ ၁၁၅ နေရာ အနည်းဆုံး ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်။
၂) သို့မဟုတ် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း မှာ ၃၄၀ နေရာ (လွှတ်တော်တစ်ရပ်မှာ များနေပြီး နောက်လွှတ်တော်တစ်ရပ်မှာ နည်းနေစေကာမူ) ရရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်
၁) နဲ့ ဖွဲ့နိုင်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အောက်လွှတ်တော်က တင်တဲ့ ဒုသမ္မတရော အထက်လွှတ်တော်က တင်တဲ့ ဒုသမ္မတရောဟာ လူထု တင်မြှောက်တဲ့ ပါတီက တင်တဲ့ ဒုသမ္မတတွေချည်းပဲ ဖြစ်လာပြီး စစ်တပ်က တင်တဲ့ ဒုသမ္မတနဲ့ ယှဉ်ရွေးတဲ့အခါမှာလည်း NLD ကတင်တဲ့ ဒုသမ္မတကသာ သမ္ဖ္မတဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါကြောင့် NLD တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ဖို့ ၊ သူဘက်လိုလို ကိုယ့်ဘက်လိုလို ဖြစ်နေမယ့် တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေကို မဲမပေးဖို့ အထူး လိုအပ်ပါတယ်။ ။
ဒီချုပ်ဟာ.. Plan B အတွက်…
ဖြစ်သင့်တာကတော့.. NDF ကနေတဆင့်.. မဘသ (ဘုန်းကြီး) တွေကိုစည်းရုံးဖို့..
CRPP လူဟောင်းတွေကတဆင့် တိုင်းရင်းသားတွေစည်းရုံးဖို့… ပါပဲ..။
Plan C လည်းထားရပါမယ်..။
C ကတော့… အာဏာမလွှဲပေးရင်..ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်.. ယူအက်စ်ရယ်.. စိန့်ပြည်ရယ်ကို လှမ်းညှိဖို့ပါ…။
.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ ကတော့ ဖွတ်အသိုင်းအဝိုင်း မှိုင်းတိုက်တာ ခံနေရလို့လားမသိ။
ဒီချုပ် အပြတ်နိုင်မယ် မထင်ပါ။
ဒီနေ့လဲ ဦးရွှေမန်း နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့တယ်လို့ သတင်းထဲ ဖတ်ရတယ်။
ဒီချုပ် ရဲ့ စစ်တပ်ပေါ်သဘောထားကိုလဲ ဦးတင်ဦးက ပြောခဲ့တယ်။ (ဇီဇီ ရဲ့ စာတမ်းထဲ လဲ ပါတယ်)
အဲဒီနောက် ဖွတ်တွေ လေနဲနဲပြောင်းလာတယ်ထင်မိတယ်။
အကောင်းဖြစ်ဖို့ဆို ဘာနဲ့ဘဲ ပေါင်းပေါင်း ပါ။ ဘာလုပ်လုပ်ပါ။
kai says: http://burma.irrawaddy.org/interview/2015/09/16/94481.html
“ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ ဆက်လုပ်မယ် ဆိုရင် လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကြိုဆိုတယ်”
ဧရာဝတီ| September 16, 2015 | Hits:7,573 မေး ။ ။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာ မျိုးစောင့် ဥပဒေ ၄ ခုကို ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ ဒီဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်း ပေးခဲ့ တဲ့ လွှတ်တော် နဲ့ သမ္မတကို ဘာများ ပြောချင်လဲ။ မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန် ကို ဒုတိယ သက်တမ်းမှာ သမ္မတအဖြစ် ဆက်မြင်ချင်သေးလား။
ဖြေ ။ ။ နံပါတ် ၁ ကတော့ လွှတ်တော်မှာ အတိုက်အခံတွေကြားထဲကနေ အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အမတ် တွေကို ကျေးဇူး တင်ဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ နံပါတ် ၂ ကတော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရဆိုတာ နာမည်ကောင်း ရချင်တာပဲ။ ကန့်ကွက် တာ ဆန့်ကျင်တာ တွေ လက်မခံချင်ဘူးလေ။ ဒီကိစ္စမျိုးကို အစိုးရက လက်မခံဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာရဲ့ ထောက်ခံမှု ကို သေချာပေါက်ရမှာပဲ။ ဦးသိန်းစိန်ကို ပိုပြီးတော့ သဘောကျမှာပေါ့။ သို့သော်လည်းပဲ သူ့ကိုတော့ သဘောကျပေမယ့် တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးအတွက် အန္တရာယ်ကြီးသွားနိုင် တယ်။ တိုင်းပြည်ကို မကာကွယ်နိုင်ဘူး ဖြစ် သွားမယ်။
အဲဒီလို နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးနေတဲ့ ကြားထဲကနေပြီးတော့ မျိုးစောင့် ဥပဒေ တွေကိုရအောင် အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ သမ္မတကြီးကိုတော့ အထူးကျေးဇူးအတင်ဆုံးပဲ။ ဒုတိယ သက်တမ်းအနေနဲ့ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ ဆက်လုပ် မယ်ဆိုရင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အနည်းဆုံး တစ်ခုပဲ ပြောရရင်၊
ဦးဝီရသူကို ထောက်ခံတဲ့ သူတွေ က အပြောအဆိုရော အတွေးအမြင်ရော အရမ်းရိုင်းတယ်ဗျ။
ဆွေးနွေးလို့မရ။ ဆဲမယ် ဆိုတာချည့်ပဲ။
ဟိုလူနဲ့ ဒီလူနဲ့ ပေးစားပြောတာတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။
အားရင် ဒါပဲ စဉ်းစားနေကြလားတော့ မသိ။
ကုလားမုန်းတာလောက်နဲ့ အမျိုးသားရေး ခေါင်းစဉ်တပ် နေတာ တော့ တယ် မနိပ်လှ
Shwe Ei says: -၀ီရသူကို ဘာလို့ထောက်ခံနေကျလဲ စဉ်းစားလို့မရ
-မြန်မာပြည်က ဆရာတော်ဖျားတွေ အားလုံး ကုလားမုန်းနေကျသလား တောင်မှတ်ရတယ်
-ခုချိန်ထိ ၀ီရသူကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးမှမတွေ့သေး … လောဘာဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အင်းး
ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောဖြစ်သေးတယ်။
တစ်ချို့ဘုန်းကြီးတွေကျ အာဏာရှင် လက်ကိုင်တုတ်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတာ။
သူတို့ကိုယ် သူတို့ အသုံးချခံမှန်းမသိတာမျိုးပေါ့။
လူရေးလူရာ သိပ် လည်မဝယ်မှာ သူ့လူ ကိုယ်ဘက်သားတွေကို မြှောက်ပေးရင် လုပ်ကြတာမျိုးထင်ပါရဲ့။
အမျိုးဘာသာ သာသနာအတော့ ဆရာ တော် ဘုရားတို့မှာ တာဝန်ရှိတာပါ ဘာညာ လှိုင်းလိုက်ပုံ ရရဲ့။
သေချာမစဉ်းစားမိရင် အဲဒီ အပေါက်စောင့် ဥပဒေက ဟုတ်သလိုလို ထင်ရတယ်။
သူတို့ကတောင် ကိုယ်တွေ ကို စိတ်ဆိုးအူးမှာ။
ကောင်းစေချင်လို့ ထုတ်တဲ့ ဥပဒေကို မကြိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးးးး
အမှန်က စစ်အဆိုးရက အဲဒါကို အသုံးချနေမှန်း ဦး ဝီရသူ လောက်ကပဲ သိနေတဲ့ သဘောပဲ။
ကျန်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက သဘောရိုးနဲ့ ရိပ်မိချင်မှ ရိပ်မိမယ်။
ခက်တာက ထောက်ခံသွားတဲ့ လူတိုင်းနဲ့ စကားပြောကြည့်။
pooch says: လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုတယ်လို့ ပြောတဲ့သူက ရူးများနေလားမသိဘူး
ထမင်းစားကြီးတာရော ဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးလို့ ပြောမလို့ လင့်ဖွင့်လိုက်မှ တွေ့တယ် အဲ့ထက်ဆိုးတဲ့စကားလုံးကို အများရှေ့မို့ မပြောတော့ပါဘူးလို့ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူး တွေ့နေတာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမျိုးစောင့်တယ်ဆိုတာ
တစ်နှစ်လျှင် သတို့သမီး သန်း ၂၀ ခန့်..
လျိုအလျို လူမှောင်ခိုကူးခံကြရ သည်။
သို့သော်..ကေတီဗီ ၊မာဆပ် ၊ကလပ် များ..
စားဝတ်နေရေးမပြေလည်သော ခေတ်ဖြစ်၍ ..
နာဂစ် ကာလအလွန် ခေတ်များတွင်..
သာ၍ သာ၍ ပိုဆိုးသေးသည်..
ဘယ်လောက် ရေတိမ်နစ်လိမ့်ဦးမည်ကို မသိသေးချေ..
.ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် ..
HIV ပိုး မည်သူ့တွင်ရှိသည်မရှိသည်ကိုပင်..
စပွန်ဆာဘ၀ ၊ စမောဘ၀..
ထိုလုပ်ငန်းများကို ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ မည်သူများနှင့်
တစ်ချို့အနှိပ်ခန်းများဆိုလျင် Oil ဖြင့်နှိပ်သော
အနှိပ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်..ဘယ်လို နှိပ်သနည်း ၊
ရေကူးဝတ်စုံဖြင့် ရေအတူတူကူးသော.. Pool bar..
ထိန်းမရသိမ်းမရထွန်းကားနေသော Sponsor ပေးခြင်းသည်..
မည်သည်ကို ဆိုလိုသည်ကို လေ့လာစေလိုပါသည်..။
မြန်မာပြည်၏ အရှုပ်ထွေးဆုံးရန်ကုန်မြို့၏ ..
မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်သရေနှင့် အရည်အချင်းကို…
တစ်ဘက်တွင် အလုပ်လက်မဲ့ များပြားလာသည့်အစိုးရ၏
ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်.. လူမျိုးစုံဘာသာစုံကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်..
ပျော်တော်ဆက်မည့် မြန်မာ့ ကေတီဗီမာဆပ်များမှ
ဥရောပ ၊ အာရှ ၊ မြောက်အမေရိက ၊
နေမ၀င်အင်ပါရာ နိုင်ငံများ ၊
မြန်မာပြည်သူများ အား..နိုင်ငံတကာမှ ..
ထိုအကျိုးရလာဒ် များထဲမှ တစ်ချက်ကား….
လုံးဝ( လုံးဝ) အထင်မသေးခြင်းပင်ဖြစ်သတည်း..။
kai says: သေသွားတဲ့မြွေက လာကြည့်တဲ့သူတွေကို ဝင်စီးတာ
17 September 2015 18:56(+0630) (လွန်ခဲ့သော9နာရီ ခန့်က)
စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းမြို့၊ ရှင်ဖြူ ရှင်လှရပ်ကွက်တွင် စပါးကြီးမြွေတစ်ကောင်အား ဒေသခံအချို့ ဝိုင်းသတ်လိုက်ရာမှ အသတ်ခံလိုက်ရသည့်မြွေက ဒေသခံအမျိုးသမီးထံ ဝင်ပူးကာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများအား မကျေနပ်ကြောင်း၊ ၄င်း(အသတ်ခံလိုက်ရသည့် စပါးကြီးမြွေ)ထံသို့ ၄င်း၏အစ်ကို ရောက်ရှိလာမည်ဟု အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဝင်ပူးပြီး ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောဆိုပြီး နောက်နေ့တွင် စပါးကြီးမြွေတစ်ကောင် ထပ်မံတွေ့ ရှိခဲ့သည်။ အသတ်ခံလိုက်ရသည့် မြွေနှင့် အသက်ရှင်လျက်ရှိသည့် မြွေတို့အား ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တအရှင်တေဇက စောင့်ရှောက်ထားသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်ဘဒ္ဒန္တအရှင်တေဇနှင့် လျှောက်ထားမေးမြန်းချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
သေဆုံးသွားတဲ့မြွေမကြီးက ဘုန်းဘုန်းကို အိပ် မက်ပေးတာတို့၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဝင် စီးပြီး ဘာလုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာလား ဘုရား။
အိပ်မက်ပေးတာတို့၊ ဘာတို့တော့ မရှိပါ ဘူး။ ဝင်စီးပြီး ပြောတာတော့ အများကြီးပါ။သေသွားတဲ့မြွေက လာကြည့်တဲ့ သူတွေရောပါ ဝင်စီးတယ်။ အများကြီးပဲ။ မနိုင်တော့မှ ဘုန်းဘုန်းက သွားထုတ်ပေးတာပါ။
သေဆုံးသွား တဲ့မြွေကြီးအတွက် ဘာလုပ်ပေးပြီး ဘယ်လိုထားသွားမလဲ ဘုရား။
သူ့အတွက် ခုနစ်ရက်ပြည့်ရင် ရက်လည် ပေးမယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ပေးမယ်။မနက်ဖြန်ဆို ခုနစ်ရက်ပြည့်ပြီ။ ဝင်ပူးပြော တုန်းက ခုနစ်ရက်ပြည့်ရင် ရှမ်းအိုးစည် တီး ပေးပါလို့ပြောတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့ ရှမ်းအိုးစည် ငှားခဲ့ပြီးပါပြီ။
မြွေကြီးကို သတ်လိုက်တဲ့ ဒေသခံတချို့အပေါ် ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ ဘာမိန့်မှာချင်လဲ၊
သူတို့လည်း မသိလို့ လုပ်လိုက်တာနေမှာ ပါ။ သူတို့လည်း တံငါသည်လား ဘာလား မသိဘူး။ ငါမျှားပြီးအကောင်ပလောင် သတ် စားနေတော့ သူကံကောင်းတာ ဘုန်းဘုန်းက မေတ္တာပို့ပြီး သူလည်းဒုက္ခ မရောက်အောင်၊ တော်ကြာ ရေနှစ်သတ်မှာဆိုတော့ ဘုန်းဘုန်း က ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်အောင်ပါ။ တကယ် တော့ ထောင်ချလို့ရတယ်။ သစ်တောက ဖမ်း လို့ရပါတယ်။ သူတို့ပါသွားရင် သူတို့မိသားစု ဒုက္ခ ရောက်မှာလေ။ ခုနစ်ရက်သားသမီး အကုန်စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းက သူတို့ဆီက အလှူခံထားလိုက် တာ။
တစ်ခါမှ ဒီလိုလည်း မဖြစ်ပါဘူး။ မကြားလည်းမကြားဖူးဘူး။
ဒီလိုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အပေါ်ရော ဘာများ ပြောချင်လဲ။
ဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေက ကိုယ်တွေ့ ဆိုတော့လည်း ယုံကြည်ရတာပဲလေ။
ဒီလို မြွေကိုသတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ဘာတွေဖြစ် နိုင်မလဲ။
ဒါတော့ ဘုန်းကြီးလည်း နားမလည်ဘူး။ ဘုန်းကြီးကလည်း သာသနာပြုနေတာ။ သူတို့ လည်း သာသနာလာပြုတာဆိုတော့ ဘုန်းကြီးပဲ ပြုလုပ်နေတာ။
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စဝင်ပူးတာလဲ။ ပူးတဲ့အခါရော ဘာတွေပြော သွားတာ ရော မှတ်မိလား။
မြွေကြီးတွေ တွေ့တယ်ဆိုပြီး သွားကြ တာပေါ့။ မြွေကြီးက သေနေပြီး သတ်တဲ့ သူ တွေကို ကျွန်မ လုပ်ချင်တယ်။ ဒေါသတွေ ဖြစ်ပြီး ပြန်လာတာ။ သူကနောက်က လိုက် လာပြီး ကျွန်မကို ဒီမှာထားပါ။ ကျွန်မ နောက် ကို လိုက်ပါစေပေါ့၊ မြွေဝင်ပူးနေတဲ့ အမျိုး သမီးက ငိုပြီးပြောတာပေါ့။ နောက်ကျ ဘာ သိတော့မှာလဲ။
kai says: ကျုပ်ပါစင်နယ်အမြင်အရတော့.. ဒီဘုန်းဘုန်းက… မဘသဘုန်းကြီးတွေထက်ပိုဆိုးတယ်..။
kai says: Sep. 17, 2015
kai says: 7Day Election
Infographic – “သမ္မတကို ပြည်သူများက မဲပေးရွေးချယ်၍ မရပါ”
နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်သော သမ္မတအား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် လွှတ်တော်များကို အခြေခံထားပြီး ရွေးချယ်ကာ ဦးစွာဒုတိယသမ္မတ သုံးဦးကို ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်…
မင်းဟိန်းကျော်၊ အမှတ် (၈၄၉)၊ 7Day Daily
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာ ဏာရှင်အစိုးရစနစ်မှ ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးလိုက်သော စနစ်အရ သမ္မတက နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သော စနစ်ဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲ သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတပင် ဖြစ် သည်။
သို့သော် သမ္မတကို ပြည်သူ များက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခွင့် မရှိ ဘဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မှ တစ်ဆင့်သာ တင်မြှောက်နိုင် သည်။
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်နှင့် တပ်မ တော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အစုအဖွဲ့တို့က ရွေးချယ်သော ဒုတိယသမ္မတ သုံးဦးအနက်တစ်ဦးကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကသမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်ရသော စနစ်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော အုပ်ချုပ်ပုံ နည်းစနစ်၌ ယေဘုယျအားဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်သော အုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် သမ္မတ ဦးဆောင်သော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိရာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် စနစ်သည် သမ္မတဦးဆောင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတစနစ် စစ်စစ်မဟုတ်ဘဲ အ ထက်ပါစနစ်နှစ်မျိုး ရောယှက်နေ သော အသွင်သဏ္ဌာန်ရှိသည့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးထားသဖြင့် သမ္မတကို ပြည်သူက တိုက်ရိုက်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခွင့်မရှိဘဲ လွှတ်တော် တွင်းမှ သွယ်ဝိုက်တင်မြှောက် သည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးထားသည်။
နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်သော သမ္မတအား ရွေးချယ်တင်မြှောက် ရာတွင် လွှတ်တော်များကို အခြေခံထားပြီး ရွေးချယ်ကာ ဦးစွာဒုတိယသမ္မတ သုံးဦးကို ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်းမရေ တွက်ဘဲ အရပ်သားရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ ၄၉၈ နေရာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသည် သမ္မတကို ရွေးချယ်တင် မြှောက်နိုင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်တွင် အ နည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ် ၃၃၃ နေရာ (၆၇ ရာခိုင်နှုန်း)ခန့် အနိုင်ရရှိရန် လိုအပ်သည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ် တော်များဖြစ်သည့် အမျိုးသား လွှတ်တော်က ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ဒုတိယသမ္မတတစ်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ရွေးချယ် တင်မြှောက်သည့် ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦးတို့အပြင် ရွေးကောက်ခံ မဟုတ်သော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့တို့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ဒုတိယ သမ္မတတစ်ဦးစုစုပေါင်းသုံးဦးကို ဦးစွာ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ရာတွင် အခြေခံဥပဒေ၌ ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် ဒုတိယသမ္မတအရည် အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက် ညီသည့် မည်သူ့ကိုမဆို ရွေးချယ် တင်မြှောက်နိုင်ကာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူများထဲမှ ဖြစ်စေ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဖော်ပြပါ ဒုတိယသမ္မတ သုံး ဦးကို ရွေးချယ်ပြီးပါက ယင်းသုံးဦး အနက်မှ တစ်ဦးကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရန် လွှတ် တော်နှစ်ရပ် ပေါင်းစည်းထား သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ခေါ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း စည်းထားသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဖော်ပြပါ ဒုတိယ သမ္မတသုံးဦးအနက် ၎င်းတို့ သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်လိုသူကို မဲပေးရွေးချယ်ကာ မဲအများဆုံး ရရှိသူ က သမ္မတ၊ ဒုတိယမဲအများဆုံး ရရှိသူက ဒုတိယသမ္မတ (၁)၊ မဲအနည်းဆုံးရရှိသူက ဒုတိယသမ္မတ(၂)အဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်က တာဝန်ပေးခန့်အပ်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ရွေးချယ်တင် မြှောက်ပြီး သမ္မတအဖြစ် တင် မြှောက်ခံရသူက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များအား ခန့် အပ်တာဝန်ပေးကာ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည် ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ပါဝင် မည့် ၀န်ကြီးဌာနအရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယ၀န် ကြီး ခန့်အပ်ခြင်းများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတက စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပြီး ယင်းအမည်စာရင်းကို ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြအ တည်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ဥပမာအဖြစ် အမေရိကန်တွင် သမ္မတစနစ်ကို ကျင့်သုံးသဖြင့် ပြည်သူလူထုက ၎င်းတို့သမ္မတကို တိုက်ရိုက်တင် မြှောက်ခွင့်ရှိ၍ သမ္မတရွေးချယ်ခံရသူသည် စိတ်ကြိုက်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ကာ ပါလီမန်လွှတ်တော်နှင့် ဆက်စပ်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
သမ္မတစနစ် မဟုတ်ဘဲ ၀န်ကြီးချုပ်စနစ် ကျင့်သုံးသော ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်မူ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲဝန်ကြီးချုပ်နေရာ ကို ပြည်သူက တိုက်ရိုက်တင် မြှောက်ခွင့်မရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးသော စနစ်နှင့် ဆင်တူ သည့် လွှတ်တော်တွင်းမှတစ်ဆင့် သာ တင်မြှောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အနိုင်ရရှိပြီး လွှတ်တော်တွင်း အမတ်ဦးရေအ များစု ရရှိသော ပါတီမှ အနိုင်ရ ပါတီအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ယင်းပါ တီခေါင်းဆောင်က အစိုးရအကြီး အကဲက ၀န်ကြီးချုပ်နေရာရရှိပြီး ၎င်းပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ ပါဝင်သောသူများဖြင့် အစိုးရဖွဲ့စည်းကာ ပါလီမန်လွှတ် တော်၏ အများစုပါဝင် ပတ်သက် မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သော စနစ်ဖြစ် သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံး သည့် သမ္မတစနစ်ကို လေ့လာရာ ၌ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် နိုင်ငံအကြီးအကဲ တင်မြှောက် သည့်စနစ်နှစ်မျိုးအနက် သမ္မတ ရွေးချယ်ရာတွင် ပါလီမန်စနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းမှု၌မူ သမ္မတစနစ်ကို ရောထွေးကျင့် သုံးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ လက်ရှိအခြေခံ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရာတွင် သမ္မတကို ပြည်သူ လူထုက တင်မြှောက်ခွင့်မရှိဘဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့အားပေးသော ပါတီအစိုးရ ဖွဲ့နိုင်ရန် ထိုပါတီမှ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ပြည်သူလွှတ်တော်နှင့် အ မျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် များ၌ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းနိုင်မှသာ မျှော်လင့်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“Mr. President, I am deeply grateful for your welcome in the name of the whole Americas. As the son of an immigrant family, I am happy to beaguest in this country, which was largely built by such families.” —Pope Francis: go.wh.gov/PopeVisit #PopeInDC
kai says: Thant Myint-U
September 25 at 6:16am · Edited ·
Yangon is southeast Asia’s architectural treasure.
It’s built heritage is worth more than all Myanmar’s jade and natural gas combined. Downtown Yangon could quickly becomeamulti-billion dollar destination, creating tens of thousand of jobs.
Renovation of buildings, clean-up, improvement in infrastructure, would pay for itself, with the right policies in place.
But will government and people realize Yangon’s potential only when it’s too late?
Shwe Ei says: အင်္ဂါဂြိုဟ် မှာရေတွေ့ဘီဒဲ့………….
Water on Mars – an interactive guide
Nasa reveals images of water on Mars
Monday 28 September 2015 16.00 BST Last modified on Tuesday 29 September 2015 00.01 BST
Dark narrow streaks called recurring slope lineae emanate out of the walls of Garni crater on Mars.
These channels, which are between 1 metre and 10 metres wide, are onascarp in the Hellas impact basin.